Lutris - GNU / Linux အတွက်အသစ်စက်စက်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအသစ် | Linux မှ
Lutris - GNU / Linux အတွက်အသစ်ပြန်လည်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမား
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ,2အပေါ်တ ဦး တည်းအပေါ်မြင်ကြပြီဖြစ်သည် GameHub နှင့်အခြားအကြောင်း ချစ်သူအဘို့, ဖြေရှင်းချက်၏ကမ်းလှမ်းမှု (client များ / ပလက်ဖောင်း) GNU / Linux ပေါ်မှာဂိမ်းများ ဒါကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဒဏ္aryာရီ Lutris လုပ်ပြိုင်ပွဲ၌ရှိ၏ GNU / Linux များ အကောင်းဆုံး operating system ၏ပရိသတ်များအတွက် ဂိမ်းတွေကက.
Lutrisအခြားသူတွေလိုပဲ GNU / Linux အတွက်ဂိမ်းဖောက်သည်များကြီးမားသောကြီးထွားလာသောကတ်တလောက်ကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်သည် ဂိမ်းတွေကကretro, online သို့မဟုတ်ခေတ်သစ် desktop consoles နှစ်ခုလုံး မှလွဲ၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ထိုသူ၏၌တည်၏ လက်ရှိဌာနခွဲ (0.5.X) မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆို interface တစ်ခုတည်းတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်အခြားသောစတိုးဆိုင်များကိုပေါင်းစပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည် ဂေါဂ y ရနှေးငှေ့သင့်ရဲ့လက်ရှိဂိမ်းစာကြည့်တိုက်နဲ့လက်ရှိလိုအပ်တဲ့ installation scripts တွေကိုတင်သွင်းဖို့။
ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့တစ် ဦး အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက် Lutris အကြောင်းကိုယခင် post ကိုလျှောက်လွှာဆိုသည်မှာ
"Python3တွင် Linux အတွက်ပွင့်လင်းသောဂိမ်းပလက်ဖောင်းကိုထုတ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Linux နှင့်လိုက်ဖက်သောဂိမ်းများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှတပ်ဆင်ရန်နှင့်စီမံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ tool က nine Linux ဂိမ်းတွေသာမက Windows emulators တွေနဲ့စပျစ်ရည်ကိုသုံးနိုင်တဲ့ဂိမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းသည် Playstation, Xbox ဂိမ်းများအတွက်များစွာအထောက်အပံ့ရှိသည်။".
ဒါပေမယ့် Lutris အဲဒါကမလွယ်ဘူး ဂိမ်းအတွက် Desktop client, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် applications များနှင့် / သို့မဟုတ်ဂိမ်းများ၏သိုလှောင်ခြင်း (စျေးကွက်), အရာ, desktop client ကိုလျှောက်လွှာနှင့်အတူစည်းညှိ ဂိမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တပ်ဆင်ခွင့်, လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်အလျင်အမြန် အတူတူပင်။ အလွန်၏စတိုင်၌တည်၏ ရနှေးငှေ့.
1.1 Lutris ကဘာလဲ။
1.2 ပလက်ဖောင်း features
1.3.1 Terminal မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း
1.3.3 Lutris အသုံးပြုခြင်း
1.3.5 installed ဂိမ်းကို run
Lutris Desktop client နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် open source ဖြစ်ပြီး အတွက် GNU / Linux၊ ၎င်းသည်အုပ်ချုပ်ရေး၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုများမှတဆင့်ကစားခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
Lutris ကဂိမ်းမရောင်းပါဘူး အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဂိမ်းများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ စီးပွားဖြစ်ဂိမ်းအတွက်သင်ဂိမ်းကိုထည့်သွင်းရန်မိတ္တူတစ်ခုရှိရမည် Lutris။ ထို့အပြင်ပလက်ဖောင်းဟုခေါ်တွင်အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုသည် "အပြေးသမား" ဂိမ်းများကိုဖွင့်ရန်၊ ဤပွဲစားများ (Steam နှင့်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ မှလွဲ၍) ကစီမံခန့်ခွဲသည် Lutrisဒါကြောင့်သူတို့ကို package manager နဲ့ထည့်စရာမလိုပါဘူး။
အဆိုပါအဆောက်အ ဦ Lutris အပြည့်အဝမှတဆင့်အလိုအလျောက်နေကြသည် script များ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်သည့် JSON သို့မဟုတ် YAML။ Optional account များကိုဖန်တီးနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့ကိုချိတ်ဆက် Lutris။ သင်၏ client သည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာရှာဖွေရေးစာကြည့်တိုက်ကိုအလိုအလျောက်စည်းညှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ လတ်တလောတွင်အကောင့် (စာကြည့်တိုက်) ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည် ရနှေးငှေ့ ၏စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူ Lutris.
၏ client Lutris သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုချိတ်ဆက်သောအခါလက္ခဏာသက်သေတစ်ခုသာသိုလှောင်ထားပြီးသင်၏လော့အင်အချက်အလက်များကိုဘယ်တော့မျှသိမ်းဆည်းမည်မဟုတ်ပါ။ ကိုအသုံးပြုခြင်း script များဂိမ်းများကို manual setup မလိုပဲကစားနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့, Lutris သည်ရပ်ရွာမှ 100% ထောက်ခံသည်စီမံကိန်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသေချာစေရန်၊ တိုက်ရိုက်အလှူငွေများသို့ဖြစ်စေ၊ Patreon ပလက်ဖောင်း.
ထဲမှာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အပိုင်းကို download လုပ်ပါ de Lutris၊ အမျိုးမျိုးသောတပ်ဆင်နည်းအမျိုးမျိုးကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်, ပုံမှန်အတိုင်း installation ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် MX Linux 19.1 (DEBIAN ၁၀.၃).
အောက်မှာ Lutris ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်:
installed ဂိမ်းကို run
သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း Lutris ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသော၊ အခမဲ့ဂိမ်းများစာရင်းသည်ကြီးမားရုံသာမကဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto»။ နှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါက Lutris ၎င်း၏တရားဝင် site ကိုမှာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Lutris ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ «Cliente para juegos» ငါတို့အကြောင်းကို အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systemsအလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ပလက်ဖောင်းနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများစွာရှိသည်, တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Lutris - GNU / Linux အတွက်အသစ်ပြန်လည်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမား
Monado သည် virtual reality ထုတ်ကုန်များအတွက် open source platform တစ်ခုဖြစ်သည်
Go 1.14 ဗားရှင်းအသစ်မှာဤနေရာတွင်ရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်